Nchọpụta | RayHaber | raillynews
Ozi Nchedo Ozi
Minista na-ahụ maka nchekwa mba Hulusi Akar kwupụtara na mkpokọta na iwere ga - amalite na 31 Mee. Dị ka nkwupụta sitere na Minista si kwuo, n'okpuru onye isi nke Mịnịsta nke National Defense Akar, Onye isi ndị agha General Jeneral Yaşar Güler, ọchịagha nke Land Force General. [More ...]
Sivas Chamber of Commerce and Industry Chamber (STSO) Onye isi oche Mustafa Eken, onye isi ala nke Turkey S / H System Bayraktar tb2'n onye na-ahụ maka ụkpụrụ ndị na-ahụ maka ịgba ụzụ (CTO) na T3 Foundation Onye isi oche nke Board of Trustees [More ...]
N'oge usoro mkpuchi ọrịa COVID-19, SAHA Istanbul buuru netwọ ọrụ ya na ụwa dijitalụ. SAHA Istanbul nke GitubeFacebook na Twitter Turkey kasị ukwuu webinar ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ebi na akaụntụ ụlọ ọrụ mkpokọta FIELD ndị otu Istanbul [More ...]
Jgbọelu F-16 na-alụ ọgụ maka ụgbọ elu Fcon nke ndị Turkish Air Force Command kụrụ ndị na-eyi ọha egwu na mpaghara Asos dị na mgbago Iraq. Na nkwupụta nke Ministry of National Defense of the Republic, Turkish Forces [More ...]
Onye agha F35 ahụ anọwo na-aga n'ihu n'oge na-adịbeghị anya. Onye F35 anyị chọrọ ịzụta na USA abụrụla ọgba aghara n'etiti mba abụọ a. Ihe kpatara ya bụ S-400 usoro nchekwa ikuku ga-azụta site na Russia. Ezigbo F35 [More ...]
BMC ka imeghari agụ owuru Leopard 84A2; Turkish Land Forces Command na-aga n'ihu na mmemme mmegharị nke isi tankị agha (AMT) na nchịkọta ya. N'ime ogo a, etinyere ngalaba 4-160 dịka ASELSAN. [More ...]
Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa mba bụ Hulusi Akar na ndị isi ndị agha General Yaşar Güler, onye isi ndị agha ala janar Ümit Dündar, Kọmịshọna nke ndị agha nchekwa Gen. Hasan Küçükakyüz na Admiral Adnan Özbal, ndị isi ndị agha mmiri. [More ...]
Usoro Nkwukọrịta ikuku Satọde nke Ku-Band, nke ebidoro igbo mkpa nke nkwukọrịta ga-ahụ maka ụgbọ elu ndị agha ụgbọelu Turkish ma bụrụ nke etolitere n'ime atụmatụ R&D nke onwe. [More ...]
Mgbe nnyefe ahụ gbasasịrị, nnyefe ihe a na-ebubata n'ọtụtụ na-aga n'ihu na Mee kwa, mgbe nnyefe nke ụdị ahụ na-agbago ọrụ Mgbakọ Ndozi Echebe MG (MKKKK) nke MPG Makine Production Group mepụtara. Mmepụta Mgbapụta MPG [More ...]
Ọrụ 'Network akwado Talent' nke ASELSAN rụpụtara gosipụtara nwamba ya site na ngwa ọgụ nke EU EURASIAN STAR'19. EURASIAN STAR (EAST) 2019 Omume, Iwu nke 3 nke Corps, abalị iri na itoolu na Istanbul ya na NATO Command na Structure Force. [More ...]
Nkọwapụta site na MSB! A ga-ekwupụta azụmahịa azụmahịa Subpoena na Mbupu site na e-Gọọmentị na ụbọchị 28 nke ọnwa Mee
Enyere ozi mgbasa akụkọ banyere ihe ndị e mere, ihe ndị na-aga n'ihu na okwu banyere isi nke Ministry of National Defense, karịsịa ọgụ megide iyi ọha egwu, megide ọrịa COVID19. Na ozi edebere n’ụdị vidiyo n’ihi ntiwapụ nke COVID-19 [More ...]
PULAT AKS na ngwugwu a na-akpọghị aha site na ASELSAN ruo ACV-15
ASELSAN, nke bụ ngalaba na-ahụ maka ụlọ ọrụ nchekwa nke Turkey, na-akwadolarị maka ọdịnihu ndị agha ka ha na-arụ ọrụ iji gboo mkpa ndị agha nke ndị agha Turkey ugbu a. Ọbụna na mmeghachi omume ọsọ ọsọ na mpaghara ọgụ taa, [More ...]
Nzuzo nke ndi ASELSAN na aru oru ugbo ala
Nchedo nke Turk, nke bụ otu n'ime ndị na-akwado ndị otu mgbakwunye ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa ASELSAN; na-eburu mgboagha nwere ọgụgụ isi maka tankị na ụgbọ agha. Mgboagha nwere 35 mm Partrel ASELSAN na-enye TÜBİTAK SAGE na MKE [More ...]
Onye isi ụlọ ọrụ nchekwa, STM ThinkTech mezuru n'ịntanetị wee dịrị ndụ. Dr. İsmail Demir na onye isi oche ASELSAN na onye isi nchịkwa Prof. Dr. Haluk Görgün, onye isi njikwa nke TUSAŞ [More ...]
Nkwupụta nke Onye isi ala DEMİR banyere Attack Aircraft F-35 Lightning II
Defence Industry President Prof. Dr. İsmail DEMİR kwuru nkwupụta gbasara ọrụ Joint Strike F-35 Lightning II na ngalaba otu nke STM ThinkTech haziri. Nkwupụta nke Onye isi ala DEMİR kwuru, “United States of America [More ...]
Site na ahụmịhe nke enwetara n’aka T-629, T-129 ATAK Attack na Ticoical Reconnaissance Helicopter Project, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ọ bụ ọgụ helikopta mepụtara (TUSAŞ). Avilọ Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Avigbọelu Turkish na Space [More ...]
Ọnọdụ Morale maka Covid-19 na Canada na-agbanwe gaa Ọdachi!
Jgbọelu ụgbọelu sitere na Royal Canadian Air Force mebiri mgbe ha na-agba ụgbọ elu iji kwado ọgụ a na-alụ megide coronavirus. Pilot Jennifer Casey nwụrụ n'ihe ọghọm ebe ọkwọ ụgbọ mmiri ndị ọzọ Richard MacDougall [More ...]
Legbọ agha nchekwa ikuku nke Japan na-ebido
Ndi Japan Air Self Defense Forces buputara obodo mbu ‘Space Operations Fleet’ nke obodo n’otu emume nke a mere na Ministry nke Defence na Tokyo na May 18. Onye na-ekwuchitere Japan Air Self Defense Forces Janes gwara Fuchu na ọdịda anyanwụ Tokyo [More ...]
Nduzi Nduzi Precision na Laser Seeker tinyere isi banye n'ime ihe agha nke Ikuku nke Turkish
Emebere ma wulite nkwado na TÜBİTAK SAGE na ASELSAN, Ntinye aka nke Kit na-agbakwunye na isi nyocha nke laser na ịba ụba nke bọmbụ ebumnuche zuru ụwa. Na nkwupụta e mere na akaụntụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi Social TÜBİTAK SAGE [More ...]
Ccessga nke Ọma nke mbufụt Ejder Yal Amn na nhazi Ambulance
Ejder Yalçın 4 × 4 Armored Comb Vehicle Nurol Makina chọrọ arụ ọrụ nke ndị agha na ndị agha nchekwa na mpaghara niile na ọnọdụ ala, gụnyere ebe obibi na ime obodo. [More ...]